Mac အတွက် PDF Expert သည် ၎င်း၏စျေးနှုန်းကို ယခုအပတ်တွင် 50% | ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Mac အတွက် PDF Expert သည် ၎င်း၏စျေးနှုန်းကို ယခုအပတ်တွင် 50% လျှော့ချမည်
ယနေ့ခေတ် Mac အတွက်ရရှိနိုင်သော မတူညီသော PDF တည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများစွာရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အနီးကပ်ကြည့်ရှုပါက Readdle မှဖန်တီးထားသော PDF Expert ၏အလားအလာနှင့်နီးစပ်သည့်ပရိုဂရမ်အနည်းငယ်သာရှိသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့် Mac အတွက် ဗားရှင်းကို စျေးနှုန်းလျှော့ချလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ 50% ၎င်း၏စျေးနှုန်း။
PDF ကျွမ်းကျင်သူ Mac အတွက် အလွန်လျင်မြန်သော PDF Reading Application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မည်သည့် PDF ဖိုင်ကိုမဆို ကြီးသည်ဖြစ်စေ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ ဖွင့်နိုင်ပြီး အမြဲတမ်း အားစိုက်ထုတ်ပုံရသည်။ ငါပုံမှန်အသုံးပြုနေပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အပြင် ဖိုင်တစ်ခုတင်သွင်းပြီးသည်နှင့် မကြာမီ ၎င်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခု။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းက အထင်ရှားဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုက ရှာဖွေမှုတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ PDF Expert အချို့နှင့် အလုပ်လုပ်သည်ဟု Readdle က အခိုင်အမာဆိုသည်။ ခေတ်မီသော PDF ရှာဖွေမှုအင်္ဂါရပ်များ ပြီးတော့ သူတို့က အရမ်းအောင်မြင်ပြီး မြန်တာဆိုတော့ သေချာတယ်။
PDF တွင် မှတ်သားထားနိုင်မှုကဲ့သို့သော အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါရှိသည်။ drop and drag လုပ်ရုံဖြင့် ဖိုင်များကို ပေါင်းစည်းပါ။. ဖောင်များအတွက် PDF ကိုတည်းဖြတ်ပါ။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဖန်တီးပြီး ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် လက်ရေးလက်မှတ်များကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် စာရွက်စာတမ်းများကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုမှာ သေချာပါသည်။
50% လျှော့စျေးဖြင့် ယခုရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခု။ ထို့ကြောင့် Mac ကွန်ပျူတာသုံးလုံးအတွက် လိုင်စင်တွင် ယူရို 80 မှ 40 အထိ ကုန်ကျသည်။ ယနေ့ 25 ရက်နေ့မှ 30 ရက်နေ့အထိ. သေချာတာကတော့ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။ သင်ရှာနေသည့်အရာသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော PDF ကို ကိုင်တွယ်ရန် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏အပိုင်းတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ကျွန်တော်အမြဲတမ်း ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ Mac App Store ရှိ မှတ်ချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်မှာ ကျွန်ုပ်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac က App Store ကို » Mac အတွက် PDF Expert သည် ၎င်း၏စျေးနှုန်းကို ယခုအပတ်တွင် 50% လျှော့ချမည်
24-လက်မ iMac ကို ဒီဇင်ဘာ 28 ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Apple သည် ဤမူပိုင်ခွင့်တွင် နုတ်ယူနိုင်သော ကီးဘုတ်ပါသော MacBook Pro ကို ပုံဖော်ထားသည်။